China Ruvara rubha kupfeka yakasarudzika bvudzi bhurashi nedhizaina yakagadzikana mubato fekitori uye vagadziri Yongsheng
Ruvara rabha kupfeka yakasarudzika bvudzi bhurashi nedhizaina yakagadzikana mubato
Ruvara: Dema, Dzvuku.… Maitiro.
Pre-kugadzirwa ------ sampuro ------ simbiso-Chinyorwa kutenga-Chikamu ---- chikamu Jekiseni-Hunhu ------ kuongorora-Chikamu ---- chikamu - ---- pamusoro ------ pedza-Hunhu ------ kuongorora-Gungano-Hunhu ------ kuongorora-kurongedza.
Yakajairwa Package: Bhurasho rega rega riine rakavhurika nylon bhegi. 24PCS / bhokisi remukati. 240PCS / katoni.
Yakasarudzika uye yakagadzirirwa mubato nerabha kupfeka zvakapfava kubata nyore nyore kuibata uye kugadzikana. Bvudzi bhurasho rapedzwa ne matte zvinhu kuti uve nechokwadi chekubata kwakasimba.
Paddle pamutsago bvudzi bhurasho inogona kunge iri muchimiro chakasiyana, inochinja cushion ine nylon kana bristles yakavhenganiswa haigoni kubata kana kudhonza bvudzi, zvakare inogona kuve nemasaji akanaka. Iyo yakakwenenzverwa base inomutsa kuyerera kweropa mumusoro, ichigadzira hutano hutano, kukurudzira bvudzi kukura, uye kunatsiridza bvudzi follicles nemasikirwo emafuta, nepo diki yekufema gomba inoderedza mweya kumanikidza kudzivirira kukuvadza ganda romusoro. Pachave neburi pamakusheni. Inogona kubvumira mweya kutenderera uye inogona kunge iine yakapfava kukwiza muviri.
Vent bvudzi bhurasho rakakodzera kushandiswa pane ese bvudzi mhando: yakanaka, gobvu kana rakamonana. Ichi chigadzirwa chakakodzera munhu wese uye chinoita zvishamiso pane yakanyorova kana yakaoma bvudzi. Iyo hombe saizi yemhepo bvudzi bhurashi inokodzera kupindika kwemusoro.
Round bvudzi bhurasho rinogona kugadzira zvinyoro nyoro kana makutu, kuwedzera muviri & kuzara kana kutsetseka & kutwasanudza yakakora, yakamonana kana wavy bvudzi.
Iwe unogona kusarudza chero ruvara rwekuvhara kwerabha, rumwe ruvara rwebrashi buri kana rakaparadzaniswa dhizaini yemusoro uye mubato. Imwe yemavara logo ndeye mahara. Yakajairika pasuru yakavhurika nylon bhegi. Zvakare isu tinogona kupa epurasitiki hanger, bepa hanger, bepa kadhi, opp mabhegi, PET bhokisi uye kuratidza.
Zvadaro: Wide-zino detangler muzinga neyakagadzikana mubato
Nguruve Bvudzi Brush
Mhangura Bvudzi Bhurashi
Metal Pin Bvudzi Brush
Mini Wooden Bvudzi Brashi
Yakasarudzika Paddle Bvudzi Brashi
Nguruve Bvudzi Brashi
Wooden Horse Bvudzi Brashi